Antalya’da Toplu Taşıma Şoförlerine Öfke Kontrolü Semineri | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး07 AntalyaAntalya ရှိပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများအတွက်ဒေါသထိန်းချုပ်ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
20 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 07 Antalya, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
Antalya အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုဖီယာ၏ ofke ထိန်းချုပ်မှုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
မြို့တော်အမျက်ဒေါသထိန်းချုပ်ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် Antalya မြို့တော်စည်ပင်သာယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc. နှင့် Antalya ကုန်သည်များအသင်းနှင့်လက်မှုပညာရှင်များသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ မောင်းနှင်သူများကိုလည်းသူတို့၏အထိခိုက်မခံမှုနှင့်စံထားလောက်သောအပြုအမူများအတွက်ဆုချခဲ့သည်။
AESOB အစည်းအဝေးခန်းမ၊ ပါမောက္ခ Dr. ဒေါက်တာ Mustafa Gülmezသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် 'ဒေါသထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း' ခေါင်းစဉ်တပ်သောသင်တန်းပို့ချများအားပေးခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့မြို့ပြမြူနီစီပယ်မြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ရထားပို့ဆောင်ရေးဌာနဌာနမှူး Nurettin Tonguç၊ AESOB ဥက္ကPresident္ဌAdlıhan Dere၊ Yesin Arslan၊ ဘတ်စ်ကားကုန်သည်ကြီးများအသင်းဥက္ကPresident္ဌနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်သည်များတက်ရောက်ကြသည်။
SHOPPING နှင့် PASSENGER တို့သည် EMPATHY ကိုတည်ဆောက်သင့်သည်
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကားမောင်းသူနှစ် ဦး စလုံးသည် ၀ န်ဆောင်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကားမောင်းသမားကုန်သည်များဖြစ်သည့် Mustafa Gülmezမှပြောကြားခဲ့သည်။ အမျက်ဒေါသသည်သာမန်လူ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Gülmezက `` ဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ အကြောင်းပြချက်နဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုငါတို့သင်ယူနိုင်ရင်၊ ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဖိနှိပ်နိုင်တယ်။ ဒေါသသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏တုံ့ပြန်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ခရီးသည်အကြားနှင့်ကားမောင်းသူနှင့်ခရီးသည်အကြားဘတ်စ်ကားတွင်ဖြစ်ရပ်များတွင်ဒေါသထိန်းချုပ်မှုသည်အရေးကြီးသည်။ ခရီးသည်များနှင့်ယာဉ်မောင်းများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စာနာနားလည်သင့်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးကကောင်းမွန်စွာပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့၊ ပြုံးပြီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နှုတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဒီသင်တန်းတွေကိုအခါအားလျော်စွာလုပ်သင့်တယ်။
ပစ်မှတ် - ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှု၊ ပျော်ရွှင်သောယာဉ်မောင်း
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ရထားပို့ဆောင်ရေးဌာန၏ဌာနမှူး Nurettin Tonguçကခရီးသည်နှင့်ယာဉ်မောင်းများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၊ ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တစ်နေ့တာအတွင်းကြုံတွေ့နေရသောဖိစီးမှုများကိုယာဉ်မောင်းများထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Nurettin Tonguçက၎င်းတို့သည် Antalya သို့လာရောက်သောပြည်တွင်းပြည်ပ guests ည့်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောပျော်ရွှင်သောယာဉ်မောင်းများကိုရည်မှန်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Antalya တွင်နေ့စဉ်ခန့်မှန်းခြေ 370 တက်ခွင့်လက်မှတ်များကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံပြယာဉ်မောင်းများကိုလည်းဆုချသည်။ ဒီသင်တန်းတွေကနေစပြီးဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ ဘတ်စ်ကားတွေသာမကတက္ကစီတွေသုံးတဲ့တက္ကစီတွေအတွက်သင်တန်းတွေလုပ်ပေးမယ်” ဟုသူကပြောသည်။
SUMMIT ကို AT ANTALYA သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Antalya ဘတ်စ်ကားလုပ်ငန်းရှင်များကုန်သည်ကြီးများအသင်းကသမ္မတ Yasin Arslan, တူရကီအတွက်အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များကို၎င်း၏အထွတ်အထိပ်မှာဖျောပွ၏တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွယ်ကူခြင်းပေါ်မှာငါတို့ငွေပေးချေမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်လုံခြုံရေး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတစ်စီးဖုန်းကိုကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါ်ဆိုခစင်တာအဖြစ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူရောက်ရှိခဲ့ပြီး," ဟု၎င်းကပြောသည်။
AESOB ဥက္ကPresident္ဌAdlıhan Dere သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏မြို့တော်၊ အန်တာယာရှိကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့်အန္တာလီးယားပြည်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ဤသင်တန်းများသည်အရေးကြီးကြောင်းကိုအာရုံစိုက်စေခဲ့သည်။
ဟောပြောပွဲ၏နယ်ပယ်အတွင်းခန်းမရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာလက်မှုပညာသည်များသည်အသက်ရှူခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံမှုအပြီးတွင် Call Center သည်နိုင်ငံသားများ၏ကျေနပ်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကြောင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများ၏အသက်ကယ်နှင့်ဖော်ရွေသောအပြုအမူများကြောင့်စာနယ်ဇင်းသမားများ၏သူရဲကောင်းဆန်ဆန်ဆုရရှိခဲ့သည်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်ရှိနိုင်ငံသားတိုင်းကိုပြောကြားခဲ့သည့် Avni Karaözနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး A.Ş. ယာဉ်မောင်း Osman Seçmenက“ မင်္ဂလာပါ။ Ile ကြိုဆိုပါ၏။ Tahsin Gedik ဟာခရီးစဉ်မှာနှလုံးရောဂါခံစားခဲ့ရသူတစ် ဦး ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းစိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဒေါသထိန်းချုပ်ရေးသင်တန်းမှ Antalya 23 / 03 / 2017 စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အန်တာယာရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများအတွက်ဒေါသထိန်းချုပ်ခြင်းသင်တန်း: Antalya Metropolitan Municipality သည်တော်လှန်ရေးသမားမီနီဘတ်စ်မှအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ဘတ်စ်ကားသို့အသွင်ပြောင်းပြီးပါကယခု 1106 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းကိုလေ့ကျင့်ပေးနေသည်။
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဒေါသထိန်းချုပ်ရေးသင်တန်းများအတွက်ယာဉ်မောင်း Kocaeli ပေးခဲ့ပါသည် 15 / 04 / 2018 ကိုကိုလီမြို့ပြမြူနီစီပယ်က၎င်း၏လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဦး စီးဌာနတွင်အလုပ်လုပ်သော 150 သည်လူ့အရင်းအမြစ်နှင့်ပညာရေး ဦး စီးဌာနမှŞletişimကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်
SAMULAŞမှအမျက်ဒေါသထိန်းချုပ်ရေးသင်တန်းန်ထမ်းများ 05 / 10 / 2015 SAMULAŞ ၀ န်ထမ်းများအတွက်ဒေါသထိန်းချုပ်ခြင်းသင်တန်း - SAMULAŞတွင်အလုပ်လုပ်သော ၀ န်ထမ်းများအားလုံးကိုဆက်သွယ်ရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ဒေါသထိန်းချုပ်ခြင်းသင်တန်းများပေးလိမ့်မည်။ Samsun မြို့တော်စည်ပင်သာယာSAMULAŞ A.Ş.
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ '' အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများအတွက်ယာဉ်အသွားအလာသင်တန်း 'ဖို့ Mota ကားမောင်းသူပေးထားခဲ့သည် 03 / 01 / 2018 Malatya ရဲဌာနရဲမှရဲများက Metropolitan မြူနီစီပယ်ယာဉ်အသွားအလာလေ့ကျင့်ရေးပန်းခြံ၏ယာဉ်အသွားအလာ ဦး စီးဌာနညွှန်ကြားမှုကိုနှစ်ရက်ယူခဲ့သည်။ ပညာရေး၌ဆလိုက်များနှင့်မတော်တဆမှုဖြစ်ရပ်များEğitimနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံရိပ်များနှင့်အတူလူ့ဘဝအတွက်အသွားအလာ၏နေရာ
Balıkesirအတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်း 07 / 03 / 2016 Balıkesirရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသင်တန်း - ပထမ ဦး စွာ၊ ဗဟိုခရိုင်၊ Karesi နှင့်Altıeylülရှိ“ ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသိအမြင်မြင့်မားရေး” လေ့ကျင့်ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့တက်ရောက်သူများအားလက်မှတ်ရခဲ့သည်။ Balıkesirမြို့တော်စည်ပင်က…
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ '' အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများအတွက်ယာဉ်အသွားအလာသင်တန်း 'ဖို့ Mota ကားမောင်းသူပေးထားခဲ့သည်
စာရင်းစစ်အစည်းအဝေး Mass Transit ယာဉ်မောင်းဆီသို့ Mersin ကျင်းပခဲ့သည်
Mota ကနေအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများအတွက်စာနာမှုသင်တန်း ''
Las Vegas မှာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းမှလေ့ကျင့်ရေး